सेतो पुतलीबाट सचेत बनौं । - पिटि अनलाईन न्यूज
सेतो पुतलीबाट सचेत बनौं ।
१० आश्विन, २०७८ २१:२४
फुर्रफुर्र नाच्दै फूलमा पुतली बसेपछि बालबालिका रमाउँछन् । ‘कति राम्री पुतली’ भन्दै पुतली भएतिर बालबालिका दौडिँदा अभिभावक पनि खुसी हुन्छन् । यद्यपि, सबै पुतली खुसी दिनेखालका हुँदैनन् । चिकित्सकको सुझाव छ, ‘‘सेतो पुतलीसँग सचेत बनौँ ।’’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका आँखा रोग विशेषज्ञ डा. सञ्जीव भट्टराईका अनुसार, मानिसको दृष्टि छिनभरमै नष्ट गर्ने आँखाको खतरनाक रोग हो– सापु  ।
सापु सङ्क्रमण भएपछि आँखामा फुलो परेकोजस्तै बाहिरबाटै टल्केको र नानी पूूरै सेतो देखिन्छ । यसले आँखाभित्र पानीले बनेको तहसम्म पुगेर नानी, लेन्स भित्री भाग भिट्रियससम्म सङ्क्रमण गराउँछ । यो रोगका लक्षण देखापरेको ४८ घण्टाभित्रै उपचार नगरे आँखाको दृष्टि गुम्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । परीक्षण गर्दा कुनै पनि जीवाणु, किटाणु नरहेको देखिए त्यो सापु हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो रोगको निदान तथा उपचार आँखा विभागअन्तर्गतका अस्पतालमा मात्र गर्ने गरिन्छ । सापुको आकस्मिक उपचार सेवा, आँखाभित्र औषधिको सुई लगाएर तथा जटिल अवस्थामा आँखाको शल्यक्रिया गरेरसमेत गर्न सकिन्छ ।
नेपाल आँखा अस्पतालका प्रमुख डा. कमलबहादुर खड्काले सेतो पुतलीबाट लाग्ने सापु रोगले जनस्वास्थ्यमा समस्या थपेको बताउनुभयो । पोखरा, स्याङ्जा, गुल्मी, लमजुङ, बाग्लुङलगायत पहाडी जिल्लामा यो रोगको समस्या देखिएको छ । उपत्यकामा पनि सापुको जोखिम बढेको र यसको जोखिम भदौदेखि मङ्सिरसम्म रहने उहाँले बताउनुभयो ।
‘सिजनल हाइपर एक्युट पानुभिआईटिस’ अर्थात् सापु रोग नेपालमा पहिलोपटक २०३२ सालमा पोखराका बालबालिकामा देखिएको थियो । सापु तीव्र गतिमा फैलिएर केही घण्टामै आँखाको भित्री भागसम्म पुग्छ । तत्काल उपचार हुन नसकेमा बिरामीले दृष्टि गुमाउँछ । अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा यो रोग प्रत्येक दुई वर्षमा नेपालमा देखिने गरेको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सापुको जोखिम बढेकाले सजग रहन सबैमा आह्वान गरेको छ । गोरखापत्रबाट
कांग्रेस अधिवेशन नुवाकोट अपडेट; २०५ मत गन्दा केसि ५ मतले...
२१ सदस्यीय समिती गठन गर्दै विनपा -७ को सु ज...